warkii.com » Saxiixa Cusub Ee Chelsea Timo Werner Oo Ku Sugan Stamford Bridge Isagoo Taageeraya Asxaabtiisa Cusub
Saxiixa Cusub Ee Chelsea Timo Werner Oo Ku Sugan Stamford Bridge Isagoo Taageeraya Asxaabtiisa Cusub
Saxeexa cusub ee Chelsea ee Timo Werner ayaa caawa ku sugan garoonka Stamford Bridge isagoo daawanaya kulanka adag ee ay kooxdiisa cusub ee Blues la ciyaareyso Wolves iyagoo u dagaalamaya inay u soo baxaan Champions League.
Weeraryahankan reer Germany oo ay Chelsea £53 milyan oo gini kaga soo iibsatay RB Leipzing ayaa taribuunka garoonka wuxuu kula biiray saxiixa cusub kal ee ay Chelsea ka soo iibsatay Ajax Hakim Ziyech iyagoo taageero iyo niyad-dhisba garoonka dhexdiisa ku siinaya xiddigaha uu soo xushay tababare Lampard.
Werner ayaa bartiisa bulshada ee Instagram waxa uu ku daabacay sawir lagaga qaaday dhabada diyaaraduhu ka haadaan isla markii uu ka degay magaalada London, waxaana qoraal kooban oo uu raaciyey uu ku yidhi: ‘Waan cadho-dhigtay … Qiyaas halka ay tahay?”
Laacibkan oo si buuxda ugu wareegi doona Chelsea marka uu soo dhamaado tartanka Champions League oo kooxda uu ka tegayo ay u gudubtay wareegga siddeeda, waxa uu xili ciyaareedkan soo dhaliyey 28 gool oo horyaalka Bundesliga ah oo 34 kulan uu saftay.
Lampard ayaa rajaynaya in 24 jirkan oo mushahar u qaadan doona toddobaadkii £175,000 uu Stamford Bridge kusoo bandhigi doono qaab ciyaareedka Bundesliga oo kale, isla markaana uu goolashaas iyo ka badan u dhalin doono.
Blues oo kale kale £37 milyan Gini kasoo bixisay Ziyech oo ay Ajax kasoo iibsatay, waxa kale oo ay doonaysaa da’yarka khadka dhexe ee reer Germany ee Kai Havertz oo Bayer Leverkusen ka tirsan, lacagtiisana lagu qiyaasay £90 milyan, taas oo ka dhigi doonta lacagta ay Blues suuqa gelisay £170 milyan oo Gini.
Laakiin warbaahinta Ingiriiska ayaa sheegaysa in qayb ka mid ah lacagtan ay Chelsea kasoo celin doonto N’Golo Kante iyo Ross Barkley oo ay iibin doonto xagaagan, halka Willian iyo Pedro ay qaab xor ah ku baxayaan.
Si kastaba, Timo Werner iyo Chelsea ayay muhiimad weyn u leedahay ciyaarta Wolves, waxaanay u baahan yihiin inay guuleystaan amaba ay barbarro galaan si ay uga mid noqdaan afarta kooxood ee kaalmaha sare ku dhamaysanaya, kana qayb-geli doona tartanka Champions League ee xili ciyaareedka dambe.